अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Action Media
निषेधाज्ञामा निर्माण कार्यमा प्रगति भिडियो सहित .
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, मनोरंजन, समाचार
काठमाडौ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष राजु खड्काले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा ढल निर्माणको कार्यहरु गर्दै आइरहनुभएको छ निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई सामाजिक दूरी कायम गरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ पासिकोटमा निर्माण कार्याले प्रगति लिएको छ , यस्ता किसिमका कार्यहरू अन्य सरोकारवालाहरुले पनि गर्दै गएमा देशको उन्नति हुन धेरै बेर लाग्दैन । वडा अध्यक्ष श्री राजु खड्का ज्युले यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । थप जानकारीका लागि तल दिएको link क्लिक गरेर भिडियो सहित हेर्न सक्नु हुनेछ । धन्यवाद ﻿
एजेन्सी । अभिनेता अजय देवगणले को’रोना संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड सेन्टर संचालन गरेका छन्। भारतमा को’रोना महामारीका रुपमा फैलिएपछि बलिउड कलाकारहरु पनि सहयोगका लागि अगाडी आउन थालेका छन्। जसमा अक्सिजन भेण्टिलेटर सहितको ब्यवस्था गरेर संक्रमितको उपचार गरिन्छ । अजयले पहिलो चरणमा मुम्बईका केही स्थानमा कोभिड केयर सेन्टर खोलेका छन् । जहाँ, बिरामीहरुले निःशुल्क सेवा पाउनेछन् । सेन्टरमा आइसियु, अक्सिजनदेखि लिएर भेन्टिलेटर सम्मको सुविधा भएको उनीहरुले बताएका छन्। उनले त्यसका लािग दादरस्थित एक पार्टी प्यालेस भाडामा लिएका थिए । त्यसैलाई उनले कोभिड केयर केन्द्र बनाएका हुन् । यस केन्द्रमा २० बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा उपलब्ध छ । अस्पतालमा भर्ना भएका सं’क्रमितले पनि अक्सिजन नपाएको र उपचारका लागि वेड समेत उपलब्ध नभएको अवस्थामा अभिनेताहरु नै कोभिड उपचार सेन्टर स्थापनाको अभियानमा ल
मानिसलाई पहिलो पटक चन्द्रमामा पुर्याउने एपोलो-११ का सदस्य कोलिन्सको निधन
१६ वैशाख, काठमाडौं । मानव जातिलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउने पहिलो अभियान एपोलो–११ को एक सदस्य माइकल कोलिन्सको निधन भएको छ । उनी एपोलो–११ मिसनको क्रू–मेम्बर थिए । क्यान्सरबाट पीडित कोलिन्सको ९० वर्षको उमेरमा २८ अप्रिलको दिन निधन भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार माइकल कोलिन्स चन्द्रमाको कक्षमा नै रोकिएका थिए भने उनका सहयोगी निल आर्मस्ट्रङ्ग र बज एल्ड्रिन चन्द्रमामा ओर्लिएका थिए । अपोलो–११ अभियान अन्तर्गत २० जुलाई १९६९ मा पहिलो पटक अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा उत्रिएको थियो । कोलिन्सको निधनपछि अब एपोलो–११ मिसनको एकमात्र जीवित क्रू सदस्य बज एल्ड्रिन छन् । उनी ९१ वर्षका छन् । एल्ड्रिनले कोलिन्सलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रिय माइक, तपाईं जहाँ रहे पनि तपाईंको ऊर्जाले हामीलाई सधैं भविष्यमा नयाँ उचाइ छुन प्रेरित गरिरहने छ ।’ एपोलो-११ का
अस्पतालबाहिर अक्सिजन ट्यांकर लिक हुदा भेन्टिलेटरमा रहेका २२ जना बिरामीको मृत्यु
नयाँदिल्ली भारतको महाराष्ट्र राज्यको नासिकको एउटा अस्पताल'मा अक्सिजन ट्यांकर चुहिँदा कम्तीमा २२ जना को'रो''ना संक्रमित बिरामी''को मृ त्यु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नासिकको जाकिर हुसेन अस्पतालमा बुधबार बिहान अस्पतालको बाहिर रहेको अक्सिजन ट्यांकर चुहिँदा करिब आधा घण्टा अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो । जसले गर्दा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका करिब १५० सिकिस्त बिरामीले आधा घण्टासम्म अक्सिजन पाएनन् । अक्सिजन आपूर्ति अवरु'द्ध हुँदा तीमध्ये कम्तीमा २२ जनाको मृ-त्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु'ले जनाएका छन् । अक्सिजन चुहिएपछि अस्पताल परिसर पूरै कुहिरीमण्डल बनेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ । लामो प्रयासपछि प्राविधिकहरु चुहावट रोक्न सफल भएका थिए । घटनालगत्तकै अक्सिजन आवश्यक सिकिस्त बिरामीहरुलाई तत्कालै अन्य अस्पतालमा सारिएको छ । घटनाका सम्बन्धमा महाराष्ट्र राज्य सरकारले
एजेन्सी;-कोरोनाभाइरस महामारीबाट एक वर्षदेखि सङ्कट व्यहोरिरहेको संयुक्तराज्य अमेरिकामा लाखौं अमेरिकी बेरोजगार छन् । अर्थतन्त्र पुनः खुला भएपनि कतिपय रोजगारदातामाथि नयाँ मानिसलाई रोजगारी दिनेतर्फ अनपेक्षित चुनौती देखिएको छ ।कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुने डरदेखि बालबच्चाको हेरचाह बापत प्राप्त हुने सरकारी बेरोजगार भत्ताको लोभमा कतिपय बेरोजगार अमेरिकीहरु काममा पुनः फर्कन चाहिरहेका छैनन् । “यो कोभिड सङ्कटका लागि विरोधाभास हो,” अक्सफोर्डका प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री ग्रेगरी डाकोले बताउनुभयो । “हामीसँग नयाँ रोजगारी र मागका बीचमा असन्तुलन छ र आउँदा महिनाहरुमा जोखिम बढ्नेछ ।” कोभिड–१९ का खोपले व्यवसायलाई सामान्यतर्फ उन्मुख गराइरहेकाले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ भने कम्पनीहरुले पनि बढ्दो माग पूरा गर्न भर्ती गर्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुको भनाईमा, सबै बेरोजगार व्यक्तिहरु आफ्नो जागि
म्यानमारको सेनाले सूकीमाथि लगायो घुस लिएको आरोप
म्यानमार– म्यानमारको सैन्य शासकले अपदस्थ नेतृ आङ सान सूचीमाथि केही सुन र ६ लाख अमेरिकी डलर अवैध तरिकाले स्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ । म्यानमारको सेनाद्वारा सूचीमाथि लगाइएको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा गम्भीर आरोप हो । सेनाले सूचीले पैसा स्वीकार गरेको भन्ने कुरा पुष्टि गरेको दाबीसमेत गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्रिगेडियर जनरल जा मिन तुनले म्यानमारका राष्ट्रपति र केही मन्त्रीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । फेब्रुअरी १ मा सैनिक ‘कू’ गरेर सूची र म्यान्मारको निर्वाचित नेतृत्वलाई अपदस्थ गरेपछि सूचीमाथि लगाइएको यो सबैभन्दा गम्भीर आरोप हो । आरोप प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण भने सेनाले दिएको छैन । सेनाले सूचीलाई अज्ञात स्थानमा राखेको छ । यसअघि सेनाले सूचीमाथि रेडियो उपकरण राखेको, कोभिड नियन्त्रणका लगाइएका प्रतिबन्धात्मक नियमहरू भंग गरे
राजपरिवारमा बस्दा बाँच्ने इच्छा नै मरेको थियो: मेगन मर्केल
काठमाडौँ– बेलायती राजपरिवारकी सदस्य डचिस अफ ससिक्स मेगन मर्केलले राजपरिवारभित्रको जीवनमा कतिपय अवस्थामा आफ्नो बाँच्ने इच्छा मरेको बताएकी छन् । बेलायती राजपरिवारभित्रको जीवन आफ्ना लागि धेरै नै कठिन भएको र कतिपय अवस्थामा बाँच्ने इच्छा नै मरेको बताएकी हुन् । व्यक्तिगत कुराहरू खोतलिएको ओफ्रा विन्फ्रेसँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मेगनले आफूले सहयोग माग्दा पनि नपाएको बताइन् ।
ह्यारी र मेगनद्वारा राजपरिवारमाथि गम्भीर आरोप, रङकै कारण छोराबाट राजकीय पदवी खोसिएको भनाइ
एजेन्सी । बेलायती राजकुमार ह्यारी र उहाँकी श्रीमती मेगन मार्कलले राजपरिवारमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिबिएससँगको अन्तर्वार्तामा मेगनले राजपरिवारका सदस्यले आफ्नो सन्तान (आर्ची) नजन्मिदै छालाको रंगलाई लिएर चासो व्यक्त गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रङकै आर्चीबाट राजकीय पदवी खोस्ने गरी नियम परिवर्तन गरिएको मेगनको आरोप छ । राजकुमार ह्यारीले आफूहरूको सम्बन्धको सुरुदेखि नै सन्तानको रंगलाई लिएर केही कुरा भएको तर त्यसबारे विस्तृतमा नबोल्ने बताउनुभयो । तर आफ्नो परिवारले रंगभेदविरुद्ध समर्थन देखाउने मौका गुमाएको देख्दा दुःख लागेको ह्यारीले बताउनुभयो ।
Sambandha Ma Sanka | सम्बन्धमा शंका New Song 2077 (924)
कर्म प्रती बफादार ईन्जिनियर निरज शाक्य । (605)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (527)
डेब्यूमै कुशल भुर्तेलको अर्धशतक (488)
शेर बहादुर डिसी को निर्देशनमा “ सम्बन्धमा संका “ भिडियो सहित । (410)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (409)
चीनको अन्तरिक्ष रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण (393)
अर्जुन थापाको निर्देशनमा “मुटु भरिको माया “ भिडियो सहित । (375)
Nepal Covid-19 tally: 7,587 PCR, 73 antigen new cases and 55 deaths in 24 hours (367)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (357)
५ जनाको मन्त्रिपरिषदलाई सरकार चलाउन कति सहज ?
जर्मनी समूह एफको उपविजेता बन्दै अन्तिम १६ मा
प्रधानमन्त्री भन्छन्- सन् २०२१ भित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइन्छ